New Boeing 737-MAX8 Multi-Livery soo dejiso
New Boeing 737-MAX8 Multi-Livery soo dejiso Bilood 4 2 todobaad ka hor #1656
Sikastaba waxaan ku dhammaystiray duulimaad cusub oo ah nooca '737 Max' oo aan soo dejiyey maanta 24-02-2020, waxaana jira cilado muuqda oo ku jira xirmada tanina waxay i su'aal gelineysaa haddii aad Rikoooo ka fiiriso soo degsashada kahor intaan la sii deyn.
Marka hore waa khaladka muuqata ee mashiinka, wali waxay la joogaan Flat hoose ee matoorka.
Iyada oo la adeegsanayo nalka 'Light Light' ee ku yaal ON 'booska, ma jiraan wax Laydh Laydh ah oo ON ah markii la duulayo habeenka dhammaan aragtiyaha kala duwan ee Cockpit waa mugdi.
Nalalka Laydhka ah iyo Taksi, iyo sidoo kale Laydhka iyo nalalka Strobe iyo nalalka Anti Colionion, ayaa aad u adag in la arko inta lagu jiro maalinta.
Ugu dambeyntiina ugu yaraan Nolosha KLM iyo Transavia waxay ku sugan yihiin Liveries hore.
Marka laga soo tago in dhammaan howlaha loogu talagalay inay u shaqeeyaan sidii aan u sameeyay Qalabka ILS ee loo maro Madaarka Amsterdam oo leh roob da ’iyo dabayl xoog leh illaa aan ka beddelayo AutoPilot-ka ugu hooseeya Altitude.
New Boeing 737-MAX8 Multi-Livery soo dejiso Bilood 4 2 todobaad ka hor #1664
Khaladka ugu weyn ee aan ka heli karo waa mishiinka ay kor iyo hoos ugu socdaan dhinacooda oo aan shaki ku jirin inay shaqeyso, marka la eego iftiinka wax faallo ah kama bixin sida diyaaradda maalin cad u shubtay mana hubin, ilaa iyo inta aan arki karo waa ok ok shaqo wanaagsan iyo dadaal wanaagsan
New Boeing 737-MAX8 Multi-Livery soo dejiso Bilood 4 2 todobaad ka hor #1667
Nooca cusub (la cusbooneysiiyay feb 25) 1.02 wuxuu saxayaa dhibaatooyinka qaarkood ee lala kulmay gaar ahaan nalalka ...
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.316